Obosara Oru: 3600mm
Herụ Ọrụ Elu: 1360mm
Arụ ọrụ ikike: 1250m / h
Akwa okpomọkụ compostbụ ezigbo usoro iji mesoo nri anụmanụ na anụ ụlọ. Ọ na-eji microorganisms agbada ala organic na anụ ụlọ na ulo ozuzu okuko, ka na-amị elu okpomọkụ, igbu pathogenic bacteria, mma humus nke organic okwu ma melite fatịlaịza arụmọrụ. Fermentation ferc (dị ka Compost Mixing Machine) nke Nanning Tagrm Co., Ltd nwere ike inye aka dị ukwuu maka ịnagide anụ ụlọ na nri ọkụkọ.
TAGRM'Compost Turning Machine nwere ike n'ụzọ zuru oke na-akpaghị aka zuru ezu, ebido, mix, azọpịa na oxygenate composting ihe, na ịgba usoro nwere ike tinye mmiri na ferment na composting ihe.
Esi mee organic fatịlaịza site TAGRM’s compost Ndinam igwe?
1. Mee ka ihe ndị dị ndụ karịa 50%.
2. me ihe compost akụrụngwa na ikpo.
3. Na-atụgharị ihe ndị na-eme ka ị na -ewepụta ala mgbe niile.
4. Nyochaa ihe gbaa ụka.
.Dị M3600 Idozi ala 100mm H2
Ike ọnụego 95KW （128PS） Nrụgide nke ala 0.51Kg / cm²
Ọnụego ọsọ 2200r / nkeji Obosara na-arụ ọrụ 3600mm Max.
Oriri mmanụ ≤235g / KW · h Ọrụ dị elu 1360mm Max.
Crawler zọcha 3750mm W2 N'azụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-24m / nkeji
Obosara Crawler 300mm Gwè na akpụkpọ ụkwụ Nri n'ọdụ ụgbọ mmiri obosara 3600mm
Ojuju 4140 × 2630 × 3110mm W3 × L2 × H1 Na-atụgharị okirikiri 2600mm Nkeji
Ibu ibu 5500kg Enweghị mmanụ Drivegbọala ọnọdụ Hydraulic
Dayameta nke ala 823mm Jiri mma Ike ịrụ ọrụ 1250m / h
A ga-ebu M3600 compost Turner na 40 HQ. Isi akụkụ nke compost igwe ga-juru n'ọnụ ke ịgba ọtọ, ndị fọdụrụ akụkụ ga-juru n'ọnụ na igbe ma ọ bụ plastic echebe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla pụrụ iche chọrọ maka mbukota, anyị ga-abịa dị ka arịrịọ gị.
Nke gara aga: TAGRM compost windrow Turner maka anụ ụlọ enyí nsị na zoo
Osote: World ama compost windrow Turner maka anụ ụlọ ehi nri
Nwa ịnyịnya ibu nri compost igwe organic ifatilaiza ...